Ny kaody kaody an'ny Samsung Galaxy Note 8 dia 'Baikal' | Vaovao momba ny gadget
Samsung dia manome ny anaran'ny Galaxy Note 8 amin'ny anarana kaody 'Baikal'
Tamin'ity taona ity dia tsy dia azontsika antoka raha handao ny andiany Note i Samsung aorian'ny olana goavana amin'ny Note 7. Nisy fisalasalana teo amin'ity andiany ity izay nahita ny tohiny maloto nanjary maloto tamin'ny Note 7 izay nirehitra ary nipoaka tampoka ka nahagaga ny mpankafy an'arivony an'arivony an'arivony Samsung nandritra ny taona maro.
Farany, Nahita vaovao tonga izahay fa misy iray hafa nanondro anay, na dia avy amin'ny mpanatanteraka Samsung aza, izay ny Galaxy Note 8 dia hahita ny mazava ary ireo mpanaraka an'arivony amin'ity andiany ity dia hanana fanontana vaovao. Ankehitriny dia manana izay mety ho anaran'ny kaody an'ity terminal ity izahay izay hovolavolaina.
Ny kaody anaran'ny Galaxy Note 8 dia ho 'Baikal' ary eo amin'ireo tsaho mipoitra dia fantatra fa hampiditra efijery 4K izy io ary hanana ny mpanampy virtoaly Bixby.
Ny fampahalalana dia avy amin'ny sivana vaovao ao amin'ny Twitter, na dia mijanona eto aza izy io mba tsy hanana vaovao na ny sasany amin'ireo fiasa an-telefaona, noho izany dia tsy maintsy mihaona amin'ny iray hafa isika hahafantarana bebe kokoa momba ny ho avy Galaxy Note 8.
Baikal dia farihy iray izay any atsimo any Siberia no misy noheverina ho ilay farihy lalina indrindra an'ny planeta. Heverinay fa hanana ny dikany ho an'ny Samsung izy amin'ny fiantsoana azy toy izany rehefa hamolavola azy mandritra ireo fotoana ireo ka amin'ny faran'ny fahavaratra dia hahatratra ny tsena izany.
Na izany na tsy izany, tsy misy fahavoazana tsy tonga, satria fantatr'i Samsung izao izany manana mpanaraka legiona avy amin'ny andiany Note noho ny zava-nitranga tamin'ny fipoahana. Ny olana fotsiny dia ny fananganana Note vaovao miaraka amina famaritana mahaliana, mba hanana fahombiazana amin'ny varotra indray, satria maro ireo nijanona tamin'ny fanontana teo aloha miandry amin'ity taona ity hanana Note 8 vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Samsung dia manome ny anaran'ny Galaxy Note 8 amin'ny anarana kaody 'Baikal'
Ny NES Classic Mini dia manohana ny lalao SNES, Sega Genesis ary Game Boy ankehitriny
Ny lalao video ara-batana koa dia hanana varotra mialoha toy ny nomerika